Radiitarayaasha dhiig baxa: sida iyo goorta la sameeyo iyo waxa loogu talagalay | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Dhaqaalaha Guriga
Waxaa hubaal ah inay imaaneyso waqti radiators-ku uusan u kululeyn sidii hore. Tani way dhici kartaa maadaama hawadu inta badan ku urursato gudaha nidaamka kuleylka oo dhan oo ay bilaabaan inay hor istaagaan wareegga biyaha ee mas'uulka ka ah kululeynta hiitarka. Si loo xaliyo dhibaatadan waa inaad barataa dhiig shucaaca. Tani waa in looga hortago hiitarka inuu ku sii daayo kuleylka hab kaladuwan. Badanaa waxaa lagula talinayaa ka hor xilli kasta oo qabow in la shubo shucaac si looga hortago dhibaatadan.
Sababtaas awgeed, waxaan qormadan u hibeyneynaa si aan kuugu sheegno sida loo nadiifiyo hiitarka iyo muhiimada uu leeyahay.
1 Muhiimadda shucaaca dhiig baxa
2 Goorma iyo sida loo shubo shucaaca
3 Qalabyada otomaatiga ah iyo isku dheelitirka haydarooliga
Muhiimadda shucaaca dhiig baxa
Sidii aan ku soo sheegnay bilowga maqaalka, waxaa macquul ah in hiitarada ay bilaabaan inay urursadaan hawo ayna hor istaagaan wareegga biyaha kululeeyayaasha. Tani waxay keenaysaa inaysan si siman u soo saarin kuleylka, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa inaad bilowdo shucaacyada dhiigbaxa. Sameynta tan waxay inta badan ka kooban tahay baabi'inta hawada oo ah shaqada wareegga hiitarka oo dhan. Sidan oo kale, waxay maamushaa hagaajinta waxtarka tamarta ee rakibidda kuleylka iyo hagaajinta isticmaalka korantada.
Waxtarka tamarta ayaa lagu kordhiyay rakibidda kululaynta iyo yareynta buuqyada dheeraadka ah. Waa wax iska caadi ah marka hawadu ka ururto nidaamyada kululaynta si loo maqlo dhawaqyo qalaad markii la furayay kuleylka. Dhawaqyadaas waxaa badanaa loo maqlaa sida codad gurguuranaya oo ay sababeen goobooyin hawo ah oo urursanaa dhammaan nidaamka kuleylka. Tani waa astaamaha in wuxuu tilmaamayaa inay lagama maarmaan tahay in la shubo hiitarka ka hor inta uusan bilaabmin xilliga kululaynta.
Marka hiitarka uu bilaabo inuusan si fiican u kululeyn, heerkul-kulku ma boodo laakiin dhagaxa qodku wuxuu sii wadaa shaqadiisa. Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay ma gaari karto heerkulka barnaamijka. Tani waxay ka dhigeysaa kuleeliyaha inuu shaqeeyo laba jeer ka badan wuxuuna sababa isticmaalka tamarta sare tan iyo tan nidaamka kuleylka uma shaqeynayo si hufan. Xaaladahaas oo kale, waxaa muhiim ah in la hubiyo in kuleyliyahayaga kululaynta uu si sax ah u shaqeynayo. Nidaamka kuleylka wax ku oolka ahi wuxuu ka hortagaa inuu lumiyo tamarta keydinta badan ee isticmaalka.
Goorma iyo sida loo shubo shucaaca
Bilaha ugufiican ee hawo qaboojiyeha lawareegaa waa bisha Sebtember iyo Oktoobar, waxyar uun kahor bilowga xilliga kululeynta xoogga badan. Aad ayey ugu habboon tahay inaan u baahanno kuleylinta annaga oo aan sugin heerkulku inuu hoos u dhaco, sababtoo ah haddaanan horay u nadiifin, waxay ku shaqeyn doontaa "kala badh gaaska", sidaasna ku lumiya tamar iyo lacag. Aan aragno maxay yihiin talaabooyinka lagu baranayo sida loo shubo shucaaca. Waa hawl yar oo fudud waana inaad raacdaa tilmaamahan:
Hubi haddii aad u baahan tahay in aad dhiig siiso hiitarkaaga: Si tan loo sameeyo, waa inaad shidaa kululaynta oo aad gacantaada ku dhaaftaa dusha sare. Haddii qaybtani ka qabow tan hoose tahay, waxay ka dhigan tahay inay jirto hawo ay tahay inay soo kacdo oo ay caqabad ku tahay wareegga.
Waa inaad ka bilowdaa hiitarka ugu dhow kuleeliyaha. Hawlgallada oo dhami waxay ku bilaabmayaan hiitarkaan ku dhow kuleyliyaha maaddaama socodka biyaha ee dabiiciga ah ay tahay in la raaco.
Dhig weel hoosta bokiska: waxaa ugu wanaagsan in la doorto koob biyo ah oo la dhigo tubbada hoosteeda. Sidan ayaan uga hor tagi karnaa carrada inay qoyaan markay biyuhu bilaabaan inay soo baxaan.
Furaha waxaa loo rogay shaandheeye: Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qadaadiic si aad u furto tuubada waalka. Marka hore hawada soo baxda mar aan furno tuubada ayaa ur leh. Halkan waxaa kale oo aan ka arki karnaa qaar ka mid ah biyaha diyaaradda wali ma noqonayaan kuwo isku mid ah.
Tubbada waa in la xidho marka diyaaraddu dheecaan tahay: Marka diyaaradda biyuhu ka soo baxdo gebi ahaanba dareere iyo isku mid, waa inaan xirnaa tubbada, maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay in hawadu mar hore soo baxday, marka waa inaan tubbada ka xirno jihada ka soo horjeedda
Qalliinka waa in lagu celiyaa dhammaan hiitarayaasha: Xusuusnow inay muhiim tahay in la raaciyo hiitarka ku shubista hiwaayadda socodka biyaha si dabiici ah. Haddii mid ka mid ah hiitarka la hareereeyo, muhiim maahan in qalliinka la sameeyo.
Ugu dambeyntii, waa ku habboon tahay in la hubiyo cadaadiska kuleylka. Waa inay ahaataa qiyamka baarka 1-1.5 tan iyo markii la nadiifiyo heerka cadaadiska waxay u egtahay inuu hoos u dhacayo. Waa muhiim in heerka cadaadisku uu yahay heerarkan.
Haddii aadan rabin inaad fuliso dhammaan howlahan kaligaa ama kaligaa, waxaad wici kartaa xirfadle shaqada imanaya sidoo kale daryeeli kara nadiifinta dhammaan qalabka hiitarka oo u daaya inuu diyaar u yahay xilliga kuleylka badan.
Qalabyada otomaatiga ah iyo isku dheelitirka haydarooliga
Nidaamyada kuleylka casriga ahi waxay yeelan karaan waalka otomaatiga ah ee leh nidaamka qiiqa otomaatiga ah. Nooca noocan oo kale ah ayaa si otomaatig ah u soo daayo hawada, sidaa darteed muhiim maahan in gacanta lagu dhiigo. Haddii xitaa nooca noocan oo kale ah, aad ogaatay in hiitarka uusan si fiican u kululeynin, sababo nabadgelyo awgood, waxaa ugu wanaagsan in lala tashado xirfadle si loo hubiyo nidaamka.
Marka hiitarka uusan kululayn 100%, waxay ka dhigan tahay in nidaamka kuleylintu uusan si hufan u shaqeyn karin, kaasoo sababa qashinka tamarta aan loo baahnayn. Nidaamka kuleylka ee hufan ayaa ka fogaan kara luminta tamarta sidaas darteedna keydin kara tamarta. Nadiifiyeyaasha kuleylka waxaa sii dheer, talaabooyin kale ayaa la qaadi karaa si waxqabadka ugu wanaagsan looga helo hiitarahan.
Markii aan ka hadlayno rakibaadda kuleylka dhexe, waxaa jira barnaamij si fudud loo fulin karo si loo hubiyo in dhammaan radiators ay helaan biyaha lagama maarmaanka u ah howlgalkooda, tan waxaa lagu magacaabaa isu dheelitirka haydarooliga. Tani waa nidaam ay tahay inay fuliyaan rakibayaal farsamo oo aqoon leh, haddii kale dhibaatooyin kala duwan ayaa dhici kara inta lagu jiro hawsha rakibida.
Waxaa jira dhowr faa'iidooyin dheelitirka Haydarooliga:
Dhinaca kale, waxay u oggolaaneysaa socodka biyaha oo ku filan inuu gaaro dhammaan hiitarka.
Soo hel qalab kuleylka kuleylka ku shaqeeya (thermostatic valves) si aad u nidaamiso heerkulka
Ugu dambeyntiina, dheelitirka saxda ah ee Haydarooliga ayaa ka fogaan kara sawaxanka dhibta badan inta lagu jiro rakibidda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida iyo goorta dhiiga shucaacaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Dhaqaalaha Guriga » Radiators dhiig
Heterotrophs: waxa ay yihiin iyo sifooyin